Mogadishu Journal » Musuqmaasuqa, Dhaca hantida iyo dilka Shacabka oo ka mid noqday tiirarka ay ku dhaqmeyso dowladda Soomaaliya “Maqaal aragti fiican leh”
Musuqmaasuqa, Dhaca hantida iyo dilka Shacabka oo ka mid noqday tiirarka ay ku dhaqmeyso dowladda Soomaaliya “Maqaal aragti fiican leh”
Soomaalida sannadkii la soo dhaafay waxey ku hungodey madax u muuqatey iney lagama maarmaan u tahay isbedel wanaagsan oo Soomaalida u horseeda horumar iyo nabad. Wax badan ayey Soomaalidu waayoaragnimo xun ka dhaxashey sannadka la soo dhaafay rajo beelka ay kala kulmeen hogaanxumida madaxda sare ee dowlada. Waxaa xusid mudan axdi xumida lagu bartay hogaamiyaha sare ee dowlada oo uu kula kacay ra’isulwasaarihii rumeystay wacadka ay galeen oo ahaa ineysan dhicin khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee dowlada. Waxaa sidoo kale xasuus mudan gudoomiyaha baarlamaanka oo ku guuldareystay xakameynta musuqa siyaasadeed ee ka dhexjira baarlamaanka, gaar ahaan codka lagu doorsanayo lacagta iyo isaga oo doorbiday inuu u noqdo afhayeen madaxtooyada halkii laga sugayey inuu la xisaabtamo maamulka dowlada. Waxaan sidoo kale la hilmaami karin xadgudubyada ay dowladu kula kacday haweenka la kufsado, saaxaafada, iyo xaqsoor xumada ka jirta garsoorka dowlada. Waxey Soomaalidu si wanaagsan uga qanacday musuqmaasuqa oo ka mid noqday tiirarka ay ku dhaqmeyso dowlada oo noqday kan ugu weyn iyo rajo inaan laga qabin in wax laga qabto hantida dadweynaha oo dhacooda la xalaaleystay.
Waxey sidoo kale Soomaalidu ku baraarugtey in dalka Soomaaliyeed uu la heyste u yahay bulshada caalamka oo uu noqdo mashruuc aan dhamaan ee caalamka loogu tuugsi tago, lagalana shaqeeyo wadanka sidii adduunka loogu soo bandhigi lahaa ceebihiisa iyo xasaradaha murugeysan oo ka abuurma Soomaaliya sida dagaalada, burcadnimada, abaaraha, iyo musuqa ka dhex jira dowlada. Marna ma dhicin sannadkii la soo gudbey cid ka hadashay musuqa ay geystaan shisheeyaha maamulaya hantida magaca Soomaaliyeed ay ku soo yaboohsadaan. Sannadkii tegey sirta laga helay waxey sahan iyo sadaal wanaagsan u tahay sannadka soo socda saansaanka laga fili karo, waxaana soo muuqanaysa tan ugu weyn iney noqoneyso wadaadada mucaaradka hubeysan oo ay awoodoodu burbureyso, una dhar-rogan doona kooxda hadda talada haysa oo ay wadamada bariga dhexe qaar ka mida ay danahooda wakiil kawada yihiin.
Muxaafadka ku soo xoogeysanaya talada madaxtooyada iyo mucaaradka hubeysan oo xukunku gacnahooda ka sii baxayo waxey u muuqataa iney kala kacsanayaan awooda dalka oo ay kala dhaxlayaan habraaca ciidanka, dhaqanka sirdoonka, iyo awood ku muquuninta xukunka. Waxaa sidoo kale muuqata in labadaas kooxood ay si fiican isugu dhegodaloolaan, lagana shaqeynayo sidii dhinaca kooxda madaxtooyada loogu soo hayinraaci lahaa. Waxaad moodaa labada kooxood in dhaqankii dowladnimada wadamada khaliijka ay wada wataan oo qaabkaas ay ku xukumaan ummad saboola, iyaguna ay noqdaan amiiro.
Waxaa dhaqanka siyaasada Soomaalida aan ceeb ku ahayn in hadba cida guuleysata xagooda loo jabo si wixii xumaa oo xaraanta loogu baratay halkeeda ay uga sii wataan, taas oo muujineysa ineysan jirin maslaxad fikradeed oo mabda’ ahaan ay dadka intiisa badan aaminsan yihiin oo ka xakameyneysa iney noqdaan hayinraac dhaqaale ku raaca meesha awoodu u liicdo. Waxaan soo aragnay ciidankii xooga dalka oo dagaalada sokeeye beelahooda ka dhex muuqdey, waxaan sidoo kale aragnay ciidamadii beelaha oo soo gumaaday dadka rayidka u badan oo wada noqday wadaado iyo culumo, kana mid noqday ciidankii maxaakiimta iyo madaxdii koox-diimeedyada. Waxaa hadda hubaal noqotay in ciidankii u badnaa wadaadada muxaafadka iyo sirdoonkii mucaaradka hubeysan iney yihiin ciidanka amniga qaranka. Ciidamadaas waxey soo mareen habraac dhar xirasho si weyn u kala duwan sida: macawis, cimaamad, duubab, qamiis iyo labiska wata astaanta ciidanka qaranka.
Xukunka la kala kacsanayo waxaa kooxahaas ay ku wadaagaan nacayb iyo jaceyl la xiriirta dhaqaalaha ay ka wada helaan wakaalado ay kawada tirsan yihiin oo ka soo jeeda qaar ka mida wadamada Carabta, kuwaas oo danahooda ay u heelan yihiin hadba cida markaas u muuqata iney maalmo sii joogi karto siyaasda heehaabeysa ee ku dhisan xukunka koox-diimeedka. Waxaa maalinba maalinta ka dambeysa soo baxeysa in mucaaradka hubeysan intooda waxgasha la raadgurayo, loona rogayo iney maxaafid u noqdaan kooxda ka arrimisa madaxtooyada. Waxaa sidoo kale xowli ku socda in dib loo muxaafidiyo, lana qarameeyo xoogagii ay soo tababarteen mucaaradka hubeysan. Ma cadda marka si buuxda la isugu milmo cida sida rasmiga ay ugu dhici doonto afgembiga ama jabhadeynta dowlada dhexdeeda ku ruuxbaxeysa.
Waxaan shaki lahayn cida tageysa iney reebeyso dhibaato aan sahlaneyn sidii looga gudbi lahaa. Waxaa hadda cad in kooxda ka talisa madaxtooyada ay fariintoodu tahay: howsha aan islawadno oo xageena xilkiina u soo wareejiya, dhaqaalo wadaaguna halkiisa ha ka sii socdo si dibudejin loogu sameeyo xulafada soo xarootay. Ma hubana sida ay u guuleysaneyso xeelada kooxda madaxtooyada maxaa yeelay weli lama arag oo lama maqal maamulo talada xoog ku kala kacsaday, isagana dambeeyey awooda oo ku guuleystey tala mideysan iney dowlad ku hogaamiyaan.
Waxaa soo socota in danowadaagooda ay soo dhexdhigaan hay’adaha Carabta oo ay kuwada xiran yihiin, kuna qanciyaan iney xukunka ku wada shaqeystaan, taasna ay sii murjiso marka si daahsoon balanqaad mustaqbalka loogu ogolaado iney mucaaradka hubeysan awoodwadaag wax looga siiyo golaha dowlada. Haddii ay dhacdo in dowlada wax laga siiyo mucaaradka hubeysan, taas waxey horseedi kartaa inuu dhaqangalo dhameystirka soo xawilida awooda iyo howlwadeenada taabacsan kooxda mucaaradka, waxeyna sidoo kale bilow u noqoneysa burburka kooxda madaxtooyada iyo iney soo degdegto dhicitaanka madaxda sare ee dowlada. Haddii aad maqashid dowlada waxaa u xiran madax ka soo goosatay mucaaradka ha rumeysan, una badi talowadaag inuu ka dhex socdo.
Waxaa la aaminsan yahay halganka wadaadadu inuu salka ku hayo helista ganacsi madaxbanaan oo laga helo xoolo badan oo aan si toosa midna u ahyn xalaal iyo xaaran. Hadda ka hor waxaa la gatay lafo dad oo ku jirey qubuurihii shisheeyuhu ku lahaa dalka, waxaa wadamada Carabta laga soo qaatay lacago fara badan oo sooryo ahaan loo soo siiyey madaxda wadaadada, Waxaa lagu maalgeliyaa shirkado gaara lacagta deeqda loo helo oo dib loogu celiyo qasnada marka laga gaaro macaashka laga rebey, waxaa dalka la soo geliyaa badeecado loo sameeyo canshuur dhaaf ama mid maqaarsaara, waxaa dalka ka hirgalay shirkado ay dhisteen madax iyo shaqsiyaad kale oo lacag wasaqa lagu maalgeliyey oo dabadeed si jaban looga gaday dad kale si loo dhaqo xaraanta lagu maalgeliyey, waxaa sidoo kale jira howlwadeeno la shaqeeya shisheeyaha oo si gaara loo naas nuujiyo oo qiimo jaban looga qaato lacagta qalaad iyo agabyo kale oo aan deeq ahayn oo si ku talogal ah u soo galay dalka ama laga maarmay ujeedooyinkii loo keenay isticmaalkooda iyagoon soo marin waxaada canshuurta, ganacsiga dhulalka gaar ahaan dib u lahaanshaha dhulalka dowlada iyo kuwa aan cidina lahyn oo aan soo gelin diwaanka dowlada, iyo qandaraas hoosaadka ciidamada iyo shirkadaha shisheeyaha lala galo oo tasiilaadka gudaha loogu soo daabulo, loogana qaadayo wasaqda qashinkooda oo lagu qubo degaanka iyo ugu dambeystii ducada ama dalaalnimada ay kooxo badan ku heystaan hayadaha gargaarka si loo gaaro dadka tabaaleysan ee ku nool degaanada ka fog magaalooyinka. Haddii aad u dhabogashid meelaha ay ka jiraan koox-diimeedyada waxaa kuu cadaanaya waxaa walaaleeya saaxiibadaas qaaliga isku ah inuu yahay dhaqaalaha ay ku heystaan xukunka.
Waxaa jira waxaan cafis lahyn, waxaana ka mida xoolaha ka dhexeeya ummadda Soomaaliyeed oo aysan jirin cid inta isku keenta dhamaan shacabka Soomaaliyeed weydiisan karta cafis iyo dhiiga laga daadiyey shacabka masaakiinta ah oo xaqoodii ay nolosha adduunka ku joogeen laga duudsiiyey oo aysana jirin cid inta aakhiro ugu tagta ka soo cafis qaadan karta. Waxaa wadanka soo maray halgan ay wadaadadu kula jireen gumeystaha reer Yurub, waxaase dagaalkooda barbar socdey umulodoox aysan jirin caalamka meel looga dhaqmay. Waxaa maanta na heysata waa wadaado ku jidbeysan dariiqooyinka kala duwan oo ay kala raacsan yihiin, kuwaas oo raba sidii isticmaarka iney wadanka taladiisa iyo kheyraadkiisa keligood ku nafciyaan, wixii ka horyimaadana xujo dimeed lagu uurdooxo.
Kooxda ka talisa madaxtooyada iyo mucaaradka hubeysan waa isku ujeedo mabda’ ahaan, laakiin waxaa kala duwan oo keliya waa shaqsiyaadka talada meerinaya. Waxey kawada shaqeynayaan sidii xoolo loo tabci lahaa si wadarnimo ah, loogana heli lahaa macaash aan loo wada sineyn. Ruuxi ka hor yimaada awooda saaran dhaqaale qeybsiga aan ku saleysneyn saamiga waxaa maalin cad lagu maquunin xoog iyo xukunka oo laga hintitiqiyo. Kaas waa xeer ka yaala kuwa saluugsan sedka loo soo qoonteeyey oo aan gaarsiineyn imaankabaxa lagu xujoobayo. Kooxda taladu ka go’do marka ay ismaandhaafaan oo hantidii lagu maalgashaday dowlada ama koox-diimeedka, qalabka wax soo saarka iyo sarooyinka dhaadheer ama maalgashiga dadban ayey noqoneysaa markaas marka malagoodu galay qaar iyaga ka mida oo u muuqdey dabagaaleyaal ismoodey libaaxyo aarar ah.
Mucaaradka Hubeysan ayaa u dhamaanaya ugu dambeynta iney u xuub siibtaan kooxda hageysa talada madaxtooyada oo awood ku qeybsiga dhaqaalaha ay dhinacooda ka soo galaan, xukunkana laga siiyo awoodooda si ay dhinacooda uga wataan abaalmarinta ay la maagan yihiin dadkii ka soo horjeedey. Taas waxey dhalineysaa masuuliyiin badan oo aan dhana ku tiirsaneyn in wadkoodu galo, waxaana tusmo yar kaaga filan xildhibaanka dharaar cad lagu diley madaxtooyada gudaheeda maalin ahayd Jimce, taariikhduna ahayd bisha December 6da, 2013, marxuumkaas oo ay u yeerteen madaxda sare ee ku sugan madaxtooyada. Dad badan oo xil doona wadkooda waa loogu yeeri doona.
Haddii aan laga hortegin taloxumada ka socota madaxtooyada lagama yaabo iney sii joogaan madaxda maanta saamigooda ka qaadanaya goleyaasha dowlada iyo qaar badan oo ka mida xildhibaanada codkooda ku shaqeysanaya ama ka dhiidhinaya dhaqanxumada madaxda sare ee dowlada. Waxaa xaqiiqa kuwa lala dagaalamayo iyo kuwa hadda la dagaalamaya ineysan waxba isku doorin dadka oo weliba kuwa hadda jooga ay minguurinayaan oo ay leeyihiin saanqaadka kuwa ay la dagaalamayaan, doonayaana iney xukunka ka kacsadaan oo ay iyagu ku fadhiistaan awooda dalka, iyagoonan marna tixgelineyn rabitaanka dadka.
Sannadka 2014 wuxuu soo dhaweynayaa Soomaalidu iney ka xorowdo dulmiga ay ku hayaan nuucyada kala duwan ee kooxaha isku baheystay dariiqooyinka diinta,waxaana rajo wanaagsan laga qabaa labadan isisaaran iney ku wada bixi doonaan sannadka soo socda. Taas waxey ku imaaneysaa dagaal beeleedyo fara badan oo dhacaya iyo faragelinta bulshada caalamka oo Soomaaliya ku soo xoogeysaneysa. Shisheeyuhu wuxuu wataa waxyeeladiisa marka ay dhacdo gobol walba iney ku amarkutaagleeyaan ciidamo shisheeye oo ka amar qaadanaya xaafiisyada siyaasadeed oo ay bulshada caalamka ka furanayaan degaanada dalka oo dhan. Waxaan la saadaalin karin dareenka ka dhalan kara adeegsiga ciidamada wadamada deriska sida ay u abuuri karto xiriir ku dhisan iskaashi wanaagsan oo dhexmara shacabka iyo bulshada caalamka. Waxaa hubaal ah sannadka cusub dhamaadkiisa in la helayo dhowr isbedel, lagana wada raysanayo xukunka wadaadada dhamaantood. Laba isu daran oo la isu dooray waa xeelad iyagoon cidna eedsan ay isku dabaraacayaan. Caqabada ugu culus ee Soomaalida cabsida looga qabo sannadka soo socda waa dagaalada u dhexeeya beelaha wada dega oo awooda dowlada gobolka qaarkood rabaan iney keligood ku helaan xukunka dowladnimada federaalka salka ku haya habqeybsiga beesha. Horudhaca dagaaladaas ayaa horay degaano badan uga bilowday sannadkan, waxaana loo maleynayaa iney ku fidaan degaano hor leh oo nabad iyo ismaamul wanaagsan uu horay uga jirey, hana hilmaamin ciidamada deriska oo ku shaqeynaya ogolaashaha wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya iney danahooda awgood la safanayaan qabiilada qaarkood.
Xidhibaannada baarlamaanka Puntland oo berri dooranaya guddoomiye iyo ku-xigeen
QM oo ku baaqday in la taageero dowladda federaalka Soomaaliya